Yekutanga alpha vhezheni yeMaui Shell yakatoburitswa | Linux Addicts
Darkcrizt | 04/04/2022 15:59 | Yakagadziridzwa ku 09/04/2022 04:56 | Desks
Pakupera kwegore rapfuura, takagovana pano pane blog nhau nezve kutanga nevagadziri vechirongwa cheNitrux, on kugadzira nzvimbo itsva yedesktop yechigadzirwa chavo uye zvino nhasi (mwedzi mishoma gare gare) vakaburitsa yekutanga alpha vhezheni yenzvimbo yemushandisi ye Maui Shell.
Iyi inzvimbo yedesktop yakagadzirwa maererano nepfungwa ye "Convergence", izvo zvinoreva kugona kushanda nemashandisirwo akafanana pane ese ari maviri ekubata skrini ye smartphone uye piritsi uye pamahombe skrini emalaptops nemaPC.
Maui Shell inogadzirisa otomatiki kuhukuru hwescreen uye nzira dziripo dzekuisa, uye inogona kushandiswa kwete chete padesktop system, asiwo pane smartphones uye mahwendefa.
Paunenge uchishanda pane akajairwa monitors, iyo shell inoshanda mudesktop mode, ine pani yakagadziriswa kumusoro, kukwanisa kuzarura nhamba yezvipo zvemahwindo uye kutonga ne mouse.
Kana yakashongedzerwa ne touch screen, iyo kesi inoshanda mutablet mode ine portrait marongerwo uye mahwindo anovhura muzere skrini kana mudivi-ne-parutivi marongerwo akafanana nematairi maneja emahwindo.
Pamafoni emafoni, zvinhu zvepaneru uye maapplication anowedzera kusvika kuzere skrini, sezvakangoita pamapuratifomu echinyakare.
Iro goko rimwe chete rinogona kushandiswa kumatafura, mafoni, uye mahwendefa pasina kugadzira shanduro dzakasiyana dzemidziyo ine akasiyana mafomu zvinhu. Semuenzaniso, paunoshandisa Maui Shell pane smartphone kana piritsi, goko rinokutendera kuti uchinje nharembozha yako kuita inotakurika yekushandira iyo inopa yakazara desktop chiitiko kana yakabatana nemonitor, keyboard, uye mbeva.
Maui Shell inoshandisa iyo MauiKit GUI zvikamu uye Kirigami chimiro, iyo inogadzirwa nenharaunda yeKDE. Kirigami yakavakirwa paQt Kurumidza Kudzora 2, nepo MauiKit inopa pre-yakavakwa UI matemplate ayo anobvumidza iwe kukurumidza kugadzira maapplication anongoenderana nesaizi yescreen uye nzira dziripo dzekuisa.
Iyo purojekiti inoshandisawo zvinhu zvakaita seBlueDevil (Bluetooth manejimendi), Plasma-nm (network yekubatanidza manejimendi), KIO, PowerDevil (simba manejimendi), KSolid uye PulseAudio.
Kubuda kwemashoko inopihwa uchishandisa yako composite maneja Zpace, iyo ine basa rekuratidza nekuisa windows uye kugadzirisa virtual desktops. Iyo Wayland protocol inoshandiswa seyo huru protocol, iyo inobatwa neQt Wayland Composer API.
Mukuwedzera kune Zpace, ganda reCask rinourayiwa, iyo inoshandisa chiputiriso chinovhara zvese zvirimo uye chinopa mashandisirwo ekutanga ezvimiro zvakaita sepaneru yepamusoro, dialog dialog, skrini mepu, nzvimbo dzekuzivisa, mapaneru, mapfupi, chirongwa chekufona interface, nezvimwe. Pamusoro pekumhanyisa Maui Shell pamusoro peZpace composite server, zvakare zvinokwanisika kumhanyisa Cask shell zvakasiyana mukati meX server-based session.
Yokutanga alpha kuburitswa kwakaratidza kuitiswa kweyakakosha Cask shell mashandiro uye kuvandudzwa kwezvinhu zvakanangana zvezvishandiso zvine maitiro akasiyana mafomu. Naizvo yakawedzera rutsigiro rweruzha, bluetooth, rima theme, majeti ekudzora network, kutamba uye kupenya.
Imwe shanduko inomira pachena kubva pane iyi alpha ndeyekuti PolKit-based agent yakawedzerwa kuita zviito zvakasarudzika uye kuti kugona kushandura desktop desktop uye kugadzirisa kwekugadzirisa kwemavara zvirongwa kwakapihwa.
Kune rimwe divi, zvinoratidzwawo izvo akawedzera chirongwa chekutanga chikamu startcask-wayland uye masevhisi anodiwa pakushanda kwayo. Iyo dhizaini yezvirongwa inopa kumberi peji yekuona kweako anonyanya kushandiswa maapplication, rondedzero yezvikamu zvechirongwa, ichangoburwa kudhawunirodha, uye mapfupi ekuwana nekukurumidza.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kutaurwa izvo munaJune, zvakarongwa kugadzira beta vhezheni, iyo inosimudzira mashandiro eCask, ichipa maneja wechikamu, chivharo chekuvhara, simba rekutonga system uye kugona kutonga kuburikidza nekhibhodi mapfupi. Yekutanga yakagadzikana kuburitswa yakarongerwa Gunyana 2022.
Kune avo vanofarira kudzidza zvakawanda nezvazvo, iwe unofanirwa kuziva kuti kodhi yeprojekiti yakanyorwa muC++ neQML uye yakagoverwa pasi pe LGPL 3.0 rezinesi uye unogona kubvunza ruzivo mune yekutanga noti. Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » Yekutanga alpha vhezheni yeMaui Shell yakaburitswa
Arti 0.2.0 inosvika nekuvandudzwa kwekugadzikana
Matatu eLinux kugovera pasina systemd